Ikhaya IZITOLO ZE-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola laseFrance Amaqiniso weClement Lenglet Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
I-LB iveza Indaba Egcwele Yomdlalo Webhola okwaziwa ngegama elithi “Genius”Lenglet“. Indaba yethu yeClement Lenglet Childhood Story Plus ye-Untold Biography ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawuleka kusukela ngesikhathi sakhe sobuntwana kuze kube manje.
Clement Lenglet Indaba Yobuntwana - Ukuhlaziywa Kuze Kube Sesikhathini. Ikhredithi ku- FC Barcelona ne-alchetron
Ukuhlaziywa kuhilela impilo yakhe esemncane, isizinda somndeni, imfundo / umsebenzi okwakha umsebenzi wakhe, impilo yakhe yokuqala yokusebenza, indlela eya endabeni yodumo, ukukhuphuka kudumo lendaba, ubudlelwane, impilo yomuntu siqu, indlela yokuphila nempilo yomndeni njll.
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi ulindelwe isikhathi eside kwiFC Barcelona, ​​umvikeli onamandla okuphatha abahlaseli basemzimbeni. Kodwa-ke, bambalwa kuphela ababheka i-Biography kaClement Lenglet ethakazelisa ngempela. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale.
Amaqiniso weClement Lenglet Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
Ukuqala, amagama akhe aphelele nguClement Nicolas Laurent Lenglet. UClement wazalwa ngosuku lwe-17th ngoJuni 1995 kuyise uSébastien nonina ogama lakhe lingaziwa edolobheni laseBeauvais, eFrance.
Umndeni kaClement Lenglet yiBeauvaisiens futhi imvelaphi yawo ivela eBeauvais. Leli yidolobha elisenyakatho neFrance eliqhele cishe ngamakhilomitha e-75 ukusuka eParis. IBeauvais yikhaya laseBeauvais Cathedral, elinye lamasonto amasonto onke amahle kakhulu esakhiwo sezakhiwo zaseGothic (isitayela esachuma eYurophu ngesikhathi seNkathi Yomusa neLate Middle Ages).
Umsuka kaClement Lenglet- Uvela eBeauvais, idolobha elidume ngesonto lakhona. Isikweletu ku-RailEurope
UClement Lenglet wakhulela emkhayeni wamaKristu aphakathi nendawo. Wayengumntwana wokuqala phakathi kwe-3 abanye abafowethu (efanekiselwa ngezansi) ozelwe abazali bakhe. UClement wakhula kanye nabafowabo ababili abancane abaseminyakeni yobudala abangafani kakhulu njengoba kubhekwa.
UClément Lenglet Omncane wayefanekiselwa kanye nabafowabo. Ikhredithi ku- Boursorama
Uma uqonda lesi sithombe, uzokwazi ukuthi laba bafowethu abathathu kamuva baba nomfowethu ongumntwana okwaziwa ukuthi uyingane yendlu yaseLinglet.
Ngesikhathi esemncane, umndeni kayise uSebastian Lenglet wathatha umndeni wakhe wawususa edolobheni lakubo laseBeauvais ukuze hlala eJouy-sous-Thelle, uMnyango eMnyangweni we-Oise enyakatho yeFrance. KwakuseJouy-sous-Thelle Clement waqoqa isasasa ebholeni.
Amaqiniso weClement Lenglet Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - I-Education ne-Career Buildup
Kusukela esemncane, uClement wayenenhloso yokuba ngumdlali webhola lezinyawo. Wayehlukile kwezinye izingane phakathi UJouy-sous-Thelle naye owayenesifiso esifanayo. Okwamenza wahluka ukuthi wabona leso sifiso njengokuqala komzabalazo. Esikhundleni sokuhamba ayobona abangane bakhe noma ukunamathela kwi-PS (PlayStation), uLelllet angancamela ukuba segadeni noyise kanye nomalume wakhe. Kwakungabaqeqeshi bakhe bokuqala.
Ukuba nomdlali webhola likababa ngaphambili, kwakulula kuClement Lenglet ukuthola lonke uxhaso oludingekayo ukubeka isisekelo sakhe somsebenzi. Kude kude nensimu yakhe yebhola lomndeni wakhe, uClement Lenglet owayeneminyaka emine ngaleso sikhathi waqala ukuncintisana nezingane ezineminyaka eyisikhombisa ubudala. Wanikezwa inombolo yehembe le-10 ngoba wayenesiphiwo kunabanye yize emncane.
Amaqiniso weClement Lenglet Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
Unyaka owodwa kamuva lapho eneminyaka yobudala be-5, uHlletlet waqala ukuya kwezivivinyo ezikhungweni zebhola eziseduze. Uphumelele izilingo neMontchevreuil FC, iklabhu elincane elisedolobheni elincane laseFrance lase-Oise eliseduzane nomndeni wakubo. Ukusondela kakhulu kwaba yisizathu esenza abazali bakhe bamvumela ukuthi ajoyine ikilabhu.
UClement wayekwazi akufunayo kusukela ngesikhathi ajoyina iMontchevreuil njengoba kuvezwa ngumngane wakhe osemncane, uMatthieu Qesmel ababedlala ndawonye ekilabhini (2001-2007). Wayephakathi kwezinye izingane ezinikezwe izindinganiso zebhola lezinyawo ezidingekayo ukuze ziqale umsebenzi wazo wobuntatheli.
UClement Lenglet Ngasekuqaleni neNhlangano yakhe yeBhola- Lapha, uphakama nabadlali abancane abasebenza nabo. Isikweletu ku-IG
Ukuzimisela kukaClement Lenglet ukuphumelela kumbone ejoyina elinye ikilabhu elibizwa ngoChantilly. Yisikhungo sezemfundo esithole idumela lokuqeqeshwa nokuhlonza ithalente elincane eFrance. Lapho ejoyina, uLelllet wabona ukuthi le kilabhu kufanele ibe nayo Kevin Gamero kwinkanyezi ethweswe iziqu ezincwadini zazo zomlando.
Umqeqeshi wentsha kaLitterlet eChantilly, uSylvain Dorard wamguqula wamyisa ngakwesokunxele sokufika kwakhe ekilabhini. Ngemuva kweminyaka emibili, waguquka, manje waba umvikeli ophakathi nendawo. UClement Lenglet waqala ukulandela ezinyathelweni zika Kevin Gameiro. Wasiza iqembu lakhe ekuqaleni kokuwina indondo yakhe yokuqala.
UClement Lenglet ofanekiselwe eceleni kwegoli lakhe nokuba nesicubu sokudubula. Isikweletu ku-IG
Amaqiniso weClement Lenglet Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Umgwaqo oDumela Igama
Kusukela ngemuva kokuthola indondo yakhe yokuqala, uClement Lenglet waqala ukucabanga ukwenza ukuthi uthando lwakhe lube ngumsebenzi wakhe. Ngemuva kokufaka indondo yakhe yokuqala kwi-CV yakhe, waqala waba nalokho ukukholwa ukuthi izokwenza. Ubaba kaLetlet akashiywanga ngaphandle emhlatshelweni wokuqinisekisa ukuthi indodana yakhe isebenza kahle iphumelela. UClement wake washo ngokubandakanyeka kukababa wakhe emsebenzini wakhe;
"Ubaba kwesinye isikhathi kwesinye isikhathi angenza uhambo lwe-3 phakathi nesonto phakathi kukaChantilly nomndeni wami ekhaya ukuze angilolonge, kanye nemidlalo yangempelasonto."
UClement wayazi ukuthi ukuze athole impumelelo, kwakudingeka kuye ukuthi abe nekhwalithi yezobuchwepheshe emidlalweni yakhe elandelwa yinhlanhla encane. Ubuye azi ukuthi udinga ithuba kubaqashi abaqhamuka emaqenjini amakhulu futhi okubaluleke kakhulu, hhayi ukuthi alimale. Lawo bekungamawashi akhe akhokhelayo.
KuChantilly, impela kufike abaqashi eceleni ababhekele abadlali abahamba phambili kanti uLeletlet wayephakathi kwalabo ababukiwe. Eminyakeni engu-15, wayesivele ebonwe ngama-scouts avela kuNancy, iklabhu iqembu lakhe eliphakeme elidlale kuFrance Ligue 1. UClement Lenglet utholwe ngempumelelo yiklabhu.
Amaqiniso weClement Lenglet Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphakama Kumlando Wendaba
U-Lenglet waqala ukudlala ibhola eliphezulu noNancy njengoba ngaleso sikhathi ikilabhu lalinamathele kuLigue 2. Uthi bewazi?… Ukhule esezingeni eliphezulu leqembu, waba ngukaputeni kule nqubo. Njengomholi, wasiza ikilabhu ekuwineni isicoco seLigue 2.
UClement Lenglet wake wasiza abadlali abasebenza naye ekuwineni uLigue 2. Isikweletu ku-Estrepublicain naku-YouTube
Ukuhola iklabhu yakhe ukunqoba isicoco sakhe sokuqala se-career yokuqala wabona uHollet ethola irekhodi lokuba ngumdlali omncane kunabo bonke owake waba ku-League 2 Best XI. Kwamenza nokuthi athandwe amakilabhu amakhulu ase-Europe phakathi kwawo okwakunguSevilla.
Ku-4 uJanuwari 2017, uHlletlet wathuthela eSevilla FC lapho aqhubeka khona ngokukhanya. Uthi bewazi?… Ubeyingxenye yohlangothi lweSevilla olugcine ishidi elihlanzekile ekunqotshweni kwabo kuMan United emzuliswaneni we2017-2018 Champions League ozungeze umlenze wokuqala we-16. UClement Lenglet ubuye waba nesandla ekucindezelweni kwesihloko se-Seville's Europa League e2017.
Uthi bewazi?… Ukusebenza kuka-Lenglet kwenza i-ESPN FC yamfaka kwi-Champions League Best XI yabo yesizini ye-2017 / 2018. Lokhu kubuye kwabamba iso le-FC Barcelona elamfaka njengomunye wezinto ezibaluleke kakhulu kuwindo labo lokudlulisa ehlobo le-2018.
UClement Lenglet waba ngumdlali we-22nd waseFrance emlandweni ukugqoka imibala yeBarça. Ukulimala kukaVermaelen futhi Umtiti inikeze uLetlet ithuba lokufaka isimangalo esikhundleni sakhe sokuvikela ngemuva kweBarca Gerard Pique. Njengasesikhathini sokubhala, ubhekwa njengothemba elide leFC Barcelona neqembu lebhola laseFrance. Bonke abanye, njengoba besho, manje umlando.
Amaqiniso weClement Lenglet Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Ubudlelwano
Ngemuva komdlali webhola ophumelelayo, kukhona intombi ebukhazikhazi kumuntu omuhle wase-Estelle. Iningi labathandi bebhola liyazi ukuthi ukungena kwezothando kwe-Interracial kuya ngokuya kuvamile phakathi kwabafana abamnyama abathandana nabamhlophe. Okuhlukile nokho, kunjalo phakathi kuka-Estelle noClement.
Hlangana nentombazane engu-Estelle- Clement Lenglets. Isikweletu ku-FC-Barcelona-Internationalcules
Indaba yothando luka-Lenglet no-Estelle ingenye yokubalekiswa ngamehlo iso lomphakathi ngoba impilo yabo yobudlelwano ayinangoma. Bobabili abathandi bajabulela a ubudlelwano obuqinile obakhelwe ekuqineni okuqinile futhi kuphela ebunganeni nase othandweni komunye nomunye.
UClement Lenglets Girlfriend- Estelle
Uma siqhathanisa nesithombe esiseduzane, ungavuma nathi ukuthi umdlali omuhle njengoClement ufanelwe i-wag enhle ngokulinganayo. Ngendlela ubudlelwano babo obuhamba ngayo, kuqinisekile ukuthi umshado ungaba isinyathelo esilandelayo esisele sezinyoni ezimbili zothando.
UClement nentombi yakhe u-Estelle bathandana kakhulu. Isikweletu ku-mesqueunclubgr
Sibonga u ubuhle bezinhlanga, UClement nentombi yakhe ngokuzayo bazohlala bengomunye wabashadikazi abazimisele kakhulu beFC Barcelona neqembu lesizwe laseFrance.
Amaqiniso weClement Lenglet Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Personal
Ukwazi impilo kaClement Lenglet kungakusiza uthole isithombe esiphelele ngaye. Ukuqala, u-Lenglet ungumuntu okholelwa ukuthi akazalwanga umnqobi noma umnqobi kepha wakhula waba nguyena.
UClement ungumuntu okhuthele ongaphumi futhi enze izinto ezihluke kakhulu kunabo asebenza nabo. U-Eric Abidal, umqondisi wezemidlalo weBarcelona ngaleso sikhathi sokubhalwa kwakhe wavuma ngaphambili ukuthi akavamile ukubona lolu hlobo lokuziphatha kwabanye abadlali. Ukudlala ibhola yikhona kufingqa impilo yakhe. Ngokufanelekile, uClement ungumuntu ocabanga, adle futhi alale ibhola.
Ngokubalulekile, uLinglet uyathanda ukuzikala nsuku zonke futhi unaka kakhulu inhlanzeko yakhe ngokuqondene nokudla akudlayo, kusho ubaba wakhe, uSebastien. UClement uthanda ukudla ekhaya futhi akakaze aye endaweni yokudlela esheshayo.
UClement Lenglet- Ukhetha kakhulu ekudleni kwakhe.
Ekugcineni, uClement ungumuntu ongayiboni i-FC Barcelona njengokuphakama okukhulu kakhulu emsebenzini wakhe. Esikhundleni salokho, ubona iklabhu njengethuba lokufeza okuthile okukhulu kakhulu.
Amaqiniso weClement Lenglet Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Komndeni
Umndeni kaClement Lenglet njengamanje bathola izinzuzo zokugxilisa ingqondo enzima kweyabo. Ngenkathi abafowabo bevame ukuvakasha futhi kwesinye isikhathi bahlala naye eningizimu-ntshonalanga yeBarcelona, ​​abazali bakaLetlet bahlala ngaphezulu eJouy-sous-Thelle, eFrance.
Kungaba nzima kubathandi bebhola ukubhekana nokuthatha umhlalaphansi - kepha ubaba kaLeklet, uSebastein uphakathi kwalabo okungenani abathola ithuba lokuqhubeka nokuphila iphupho lakhe ngendodana yakhe. Ngenkathi ubaba wakhe ekhombise ukwesekwa okuningi ngomsebenzi wakhe, umama kaLetlet uphila impilo ethule engasho lutho.
Ngenxa yempumelelo kaClement, kuvela ukuthi “Wonke umndeni wethu usefu, ”Kusho amahlaya uNathan Lenglet- omunye wabafowabo abancane. Ngaphandle kokungabaza, uClement uye waba yisibonelo kubafowabo.
Amaqiniso weClement Lenglet Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso we-LifeStyle
Ukunquma phakathi kokusebenziseka nenjabulo akusoze kwaba isinqumo esinzima kuClement Lenglet. Yize ukwenza imali kungobubi obudingekayo, kepha u-Lenglet ngeke akhathalele ukuchitha ingxenye enkulu yemali yakhe ngenxa yekhono lokugcina imali yabo isheke futhi ihlelekile.
Ukungazibonisi izimoto ezinamakhaza, izindlu ezinkulu nokugqokwa kwangaphandle kuwuphawu lokuthi isici sezezimali sempilo yakhe siyalawulwa.
Amaqiniso we-Clement Lenglet LifeStyle. Isikweletu ku-IG
Amaqiniso weClement Lenglet Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso angaziwa
INKOLO: Kubonakala sengathi uClement Lenglet ungumKristu ngokholo. Igama lakhe eliphakathi uNicolas libonisa ukuthi kungenzeka aqhamuke emndenini wamaKatolika okungenzeka ukuthi akhonza eBathedral laseBeauvais.
IZENZAKALO EZIYENZE UMNYAKA WOKUZALWA: Unyaka (1995) lapho azalwa yabonwa I-eBay izophila bukhoma ne-movie yama-epic yempi yaseMelika "Inhliziyo Eqinile" iyadedelwa. Kwakungunyaka futhi uhulumeni waseNdiya waliqamba ngokusemthethweni idolobha laseBombay laya eMumbai.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Clement Lenglet Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso. At LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
I-Barcelona Football Diary
I-Sevilla Football Diary
Ama-Odsonne Edouard Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
I-Marcus Thuram Ingane Yendaba Yobuntwana kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
Amaqiniso we-Yacine Adli Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
IJean-Philippe Mateta Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
Ama-Dayot Upamecano Ubuntwana Bombali I-Untold Biography Amaqiniso
I-Iraima Konate Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
I-Dan-Axel Zagadou Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
Ama-Boubakary Soumare Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
UMoussa Dembele Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Blaise Matuidi Indaba Yobuntwana Kanye ne-Untold Biography Facts
I-Sebastien Haller Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts
Samir Nasri Ubuntwana Indaba Plus Untold Biography Facts
U-Olivier Giroud Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts